Sabai Sabai Seafont Superior Bungalow - I-Airbnb
USabai unezimvo eziyi-104 zezinye iindawo.
Ngokuthe ngqo elunxwemeni, i-bungalow yethu ephezulu inebhedi ephindwe kabini kunye neebhedi ezilala abantu abayi-4. Ine-aircon kunye nebalcony ejonge elwandle. I-ensuite enendlu yangasese kunye neshawari eshushu.
Isetingi eyothusayo yendalo eselunxwemeni kunye negadi yebhabhathane, ezaliswe yimithi yecashewnut kunye neentendelezo zekhokhonathi. Iidekhi ezininzi ezinomthunzi, ii-hammocks kunye neendawo ezikhuselweyo apho ukuphumla ngaselwandle, kunye negumbi lokuphumla lesofa epholileyo, indawo yokutyela kunye nebar ye-cocktail yaselwandle.
sihlala sikhona ukuncokola okanye ukunceda ngayo nantoni na :)